🥇 ▷ Xiaomi waxay soo saartaa epilator koronto u adkeysta biyaha wax ka yar 15 euro ✅
Xiaomi waxay soo saartaa epilator koronto u adkeysta biyaha wax ka yar 15 euro
Qalabka cusub ee ‘Xiaomi Smate Mini Soft Soft Soft’, waa aalad loogu talagalay gabdhaha
Xiaomi, ayaa horey u soo saartay dhowr xiiro oo koronto oo loogu talagalay dhagaystayaasha ragga ah, laakiin maanta waxay soo saartay qalab cusub oo xiirashada kaasoo loogu talagalay haweenka inay isticmaalaan, Cun yar Mini.
Meesha bannaanka ka ah guriga waxaa lagu daboolay caag jilicsan, kaasoo u oggolaanaya epilator-kan inuusan ka soo bixin gacmaha. Wax aad u faa iido badan leh hadaad u isticmaalayso musqusha oo aad gacmo qoyso. Qalabka wuxuu leeyahay badhan koronto oo keliya.
Qalabka Xiirashada Yar ee Yar ee Xiaomi
Nooca madaxa wareega ee nooca “R” waxaa loo habeeyay inuu maqaarka ka ilaaliyo taabashada tooska ah ee mindida. Soo-saareyaashu waxay sheeganayaan in Qalabka Skoke Mini ee xiirashada jilicsan uu xiirto xitaa timaha gaaban.
Qalabka wuxuu leeyahay darajo ilaalin ah IPX7, waxaa laga ilaaliyaa biyo gaabin muddo gaaban ah oo aan ka badnayn 1 mitir wax aan ka badneyn 30 daqiiqo. Taasi waa, epilator-ka korontada ama xiirashada waxaa loo isticmaali karaa qubayska ama qubeyska.
Xiaomi Sigaar Mini
The Qalabka Xiirashada Yar ee Yar ee Xiaomi Waxaa ku qalabeysan qalabka isku xira USB-C ee ku dallacsiinta. Dacwad ayaa noo oggolaaneysa inaan u isticmaalno xiirashadaan waqti adag.
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah muuqaalka sare ee Xiaomi mini epilator uu yahay in laga heli karo $ 14 casaan iyo buluug ah. The Qiimaha Qalabka Xiirashada Yar ee Xiaomi Runtii waa mid xiiso leh oo yar. Maxaa shaki la’aan u saamaxayn doona in badan oo gabdho ah inay rabaan inay qabsadaan kuna raaxaystaan ​​dhammaan faa’iidooyinka ay adeegsigeedu leeyahay.
Waxaan qiyaaseynaa inay dhowaan gaari doonaan dukaamada rasmiga ah ee Xiaomi, the Dukaankayga. In kasta oo ay waliba ka heli karaan dukaamo badan oo khadka tooska ah laga isticmaalo.
Salaan ka qoto dheer ee baaluska.
Xiaomi soo gelitaanka ayaa bilaabaysa epilator biyo u adkeysta oo aan ka yarayn 15 euro ayaa markii ugu horeysay lagu daabacay Red Planet.